२६ वर्षका युवाले तास खेलेर जिते ४० करोड रुपैयाँ ! कसरी ? – Online Khabar 24
तासको एउटा ठूलो प्रतियोगिताको फाइनलसम्म पुगेर उनले यो पुरस्कार जितेका हुन् । ज्याक खेलेको हेर्न उनकी गर्लफ्रेण्ड पनि आएकी थिइन् । उनले ज्याकको हैसला पनि बढाइन् ।
डेली मिररको रिपोर्टअनुसार प्रतियोगितामा ज्याक तेस्रो स्थानमा रहे । जित हात पारेपछि ज्याकले भने ‘मलाई लाग्छ मैले धेरै राम्रो खेलें र यही कुरा मेरो लागि महत्वपूर्ण छ । निसन्देह यो केही अर्थमा मेरो जीवन नै बदल्नेवाला छ ।
यो धेरै पैसा हो तर यो केरो लागि सबैथोक होइन । म यो खेललाई माया गर्छु र भविष्यमा पनि खेल्न जारी राख्नेछु । मलाई आशा छ आगामी वर्षमा म अझै धेरै पोकर खेल्नेछु ।’
यो प्रतियोगितामा सबै खेलाडीहरुलाई खेल सुरु गर्नको लागि समान संख्यामा चिप्स दिइन्छ । ज्याक ७ करोड ७३ लाख चिप्सका साथ अन्तिम ३ मा प्रवेश गर्न सफल रहे । उनलाई अमेरिकी मूलका जर्ज होम्सले आउट गरिदिए । होम्सलाई जर्मनीका कोरे एल्डेमिरले आउट गरे । पहिलो भएका एल्डेमिरले ६ मिलियन पाउण्ड पुरस्कार जिते । यो खबर डिसप् नेपालबाट हो ।
Prevमर्नु भन्दा ठिक पहिले धेरै जसो मानिसहरु के भन्छन् ? यस्तो छ आश्चर्यजनक खुलासा
nextनयाँ भेरियन्टका कारण अब यी ९ देशबाट नेपाल आउन नपाउने !